Adeegga shabakadda khariidadaha hore ee ka mid ah kuwa ugu caansan ee Mapping Volume 28-124 - Geofumadas
Qoraalkii ugu dambeeyay ee mugdiga 28 -ilaa bisha March iyo April 2019- Maqaalada Mapping waxay u dhigantaa mawduucii ugu muhiimsanaa ee la xidhiidha Shirka IX Iberian ee Meelaha Macluumaadka Meelaha. Xulashada todoba qodob oo cilmi baaris ah, oo lagu daabacay joornaalkan muhiimka ah ee mawduuca geoscientific, ugu yaraan afar mowduuc ayaa ka taagan, kuwaas oo aan ku sharraxeyno sharaxaad kooban.
Uruurinta waa daabacaadan farsamo-cilmiyeed la 28 sano taariikhda uu higsanayaa faafinta ee cilmi-baarista, mashaariicda iyo shaqada sameeyey berrinkii geomatics iyo nidaamo xiran daankii, iyadoo si gaar ah xoogga la codsiga oo duurka ku of Earth Sciences.
Iyadoo la tixgelinayo tifaftirkeena, mawduucyada la doortay waxay ahaayeen kuwan soo socda:
Adeegga shabakada khariidadaha hore
Adeegga macluumaadka ee Qeybta Teknoolojiyadda Marine (UTM-CSIC),
Hirgelinta qaabka INSPIRE ee Diputación Foral de Álava
INSPIRE Xakamaynta Tayada ee metadata, xogta iyo adeegyada: sida loo isticmaalo hababka baarista ee abstract iyo executableable.
Waa mid ka mid ah qodobbada baaritaanka, taas oo nagu soo jiidatay fiiro gaar ah marka aan eegno cinwaanka; waxaa qoray Alvaro Bachiller, Carolina Soteres, iyo afar kale oo wada-jir ah. Dhismuhu wuxuu leeyahay wax badan; in la ogaado mustaqbalka waa inaan ogaano wixii dhacay waqtigii hore, waxa dhab ahaantii khuseynaya juquraafi ahaan.
Daabacaadan qabyada ah ee maps jir ah - loo yaqaan La Cartoteca- bilowday tan iyo 2008, oo waxaa lagu fuliyay by CNIG - Xarunta National Geographic Information, iyadoo la kaashanaysa Waaxda Territory National Institute Geographic iyo Institute Geographic Qaranka - IGN. Waxa xiiso leh waa in hay'adaha sheegnay ayaa ururinta macluumaad badan oo aan ollogga taariikhiga ah tan iyo qarnigii lix by kooxda in ka dhigaysa Library Map ka.
"The maps taariikhiga ah, caawin aqoonsado morphologies, dhismayaasha la dhisay ka hor waxa hadda loo yaqaan, oo ay abuuri karaan falanqaynta la taaban karo oo dheeraad ah, saadaasha ah waxa uu ahaa iyo sii joogi doonaa meesha bannaan ee, ka sokow isagoo dhaxal ahaan qaranka."
Dhowr ka mid ah dukumintiyadan qiimaha leh, oo ay ku jiraan khariidadaha dadweynaha, khariidadaha, ama khariidadaha loo yaqaan 'cadastral topographic maps', ayaa mar horeba la tashan kara ardayga, xirfadle ama hiwaayad. Qodobbada kor ku xusan waxay ku saleysantahay mabaadi'da CNIG, iyagoo bixinaya Adeegyada Khariidadda Webka ee - qawaaniinta WMS - inay u adeegaan sidii kaydka xogtan oo badan.
WMS, waxaad heli kartaa adeegyo badan sida:
Waraaqaha Kiloometeriga - Qorshooyinka darajada cadastifoolka: oo leh cabbirka 1: 2000. Dukumiintan taariikhiga ah waxay kor udhexday 1861 iyo 1870; by Guddiga Guud ee Tirakoobka - hormarinta IGN.
Qorsheyaal: Kuwani waa layliyo muujinaya qorshooyinka qoraalka ah ee u dhexeeya 1870 iyo 1950, ka hor inta aan la dhisin khariidadda qarniga ee qaranka ee xNUMX: 1.
Qoraalada Hore ee Khariidadda Qaranka Qaranka - MTN, oo laga soo saaray taariikhda 1875 iyo 1968. Adeeggan waxaa ka mid ah laba nooc oo kale oo ah dukumiintiyada sawirrada:
daqiiqadaha MTN ee u dhexeeya 1915 ilaa 1960,
Koobka Koowaad ee MTN: wuxuu ka kooban yahay xaashida 4123, oo laga sameeyay 1975 ilaa 2003.
data da'ayeen qaran codsatay, si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo magaalo muhiimad istiraatiiji ah oo taariikhi ah oo weyn sida Madrid, waxaa u suurtagashay in ay soo uruuriyaan macluumaad badan oo la xiriira waxaana la bixiyaa adeeg isku mid ah khariidaynta web - WMS. Information cartography taariikhiga ah ee Madrid, waa mid aad u kala duwan oo ka soo xogta kor ku xusan sida ay yihiin: Diyaarad Mancelli ee Madrid, map Jooloojiyadda of the Town iyo Court of diyaarad Madrid Nicholas Chalmadrier, diyaarad joomateri Madrid, diyaarad Madrid iyo map of Madrid
Maqaalkani, waxay tilmaamayaan adeegyada kale ee la xidhiidha macaamiisha CNIG-ga, sida wareysiga orthophoto, iyo tiknoolajiyada loo isticmaalo in mashruucan laga dhigo iyada oo loo marayo adeegga taariikheed ee ku takhasusay. Adeeggani wuxuu bixiyaa lix nooc oo ah lakab loogu talagalay dadka isticmaala:
Duulimaadyada Mareykanka: taxane B (1956 AND 1957),
Diyaarinta Interministerial: Shaqooyinka Golaha sare ee Spain ee u dhexeeya 1976 iyo 1986,
Diyaarad gudaha ah: Miisaanka 1: 18.000 u dhexeeya 1981 iyo 1983,
OLISTAT duulimaadka: Waxaa kor u qaaday Wasaaradda Beeraha, oo ah gobollada olive-ka ee u dhexeeya 1997 iyo 1998,
iyo duulimaadyada PNOA: waxay daboolaysaa dusha guud ee qaranka oo leh saddax sano ah, keliya xogta ka timid 2004 ilaa 2016 ayaa lagu daray.
Waxa intaa dheer in kor ku xusan, on goobta, nooca iyo taariikhda abuurka ah ee badeecada u tilmaamay sida uu ahaa daaweynta ee xogta, tan iyo, macluumaad aan ollogga shukaansi Dib 100 sano ka hor, waxay u baahan tahay geeddi-socodka diyaarinta , qiimaynta iyo kaydinta ka sii jilicsan ka badan xogta aan ollogga more dhawaan. Tusaale ka mid ah daaweynta waa in maps intaan nooc ka mid ah macluumaadka sare, maraan habka digitization by photogrammetric xirfad iyo baaritaano georeferenced, pp mudan ajrigooda 400 iyo 254 qiyaasta more Uhabee mudan ajrigooda pp qiyaasta dheeraad ah ay cadahay ka dibna lagu kaydiyaa on server CNIG, kaas oo lagu go'aansaday in sida ay size haddii server WMS waxaa lagu soo diray ama ku kaydsan disk dibadda.
Waa in sidoo kale la sheegaa in qorayaashu si faahfaahsan u qeexayaan sida horumarinta mashruuca lafteedu ay ahayd sanadihii ugu dambeeyay, tan iyo markii loo furay dadweynaha, oo muujinaya tirokoobyada tilmaamaya: nooca server, tirada booqashooyinka, tirada codsiyada, (Gb) iyo mashaariicda martigeliya xogta.
salinity ama dusha heerkulka: In cilmi, by Juan Valderrama, Susana Tagarro, iyo laba co-qorayaasha, shaqo laanta Marine Technology in ujeedadiisu tahay inuu bixiyo meydadka macluumaad ku saabsan meelaha gobolka badda sida lagu sharxay.
Cutubkan waxa ku qabata hawl xiiso leh, sida uu leeyahay si ay u ururiyaan iyo falanqaynta xogta la soo ururiyay kasta 24 saacadood, sidaa darteed waxaan u qaadan turjumo mugga sare ee dabeecadda kala duwan sababta oo ah waxqabad ee badaha. Wasaaradda Sayniska, curinta iyo Jaamacadaha - in baaritaan this leh laygu yareeyo isticmaalka xogta la soo ururiyay oo duurka ku, ka dibna loo warshadeeyey, falanqeeyay iyo wareejiyay guddiyada maamulaya waxaa iftiimiyay.
article The sheegaye saamaynta xoojinta Kaabayaasha ah xogta aan ollogga Marine weelashii oceanographic kasta oo ka mid ah marxaladaha loo baahan yahay si loo gaaro this waxaa lagu soo bandhigay, sida: go'aanka xirfadaha uga dhiga qalabka ururinta, falanqaynta iyo Escrow xogta (physico-kiimikada, bayoolajiga, Haseyeeshee, ama saadiyayaasha), metadata dhismaha, diiwaanka, hirgelinta buugga ka mid ah ololaha - taas oo muujinaysa nooca xogta lagama maarmaanka u ah guud ahaan shuruudaha software saarka final- (in this Kiiska geonone)
Mashruucaan waxaa abuuray by Jorrín Abellán iyo Oscar Diego Alonso, waa adag la xiriira in dulucda ugu weyn ee magazine ee mugga this, si aad u bilowdo siiyo sababaha muhiimada ay leedahay dhismaha iyo hirgelinta astaanta Data kaabayaasha dhaqaalaha - SDI sida loo Waxyoodo ahayn waxa ay qaadatay caqabadda ah in la iswaafajiyo.
Waxay sidoo kale sharaxayaan qaababka sida qaabka isdhexgalka ee qaabka xogta macneheedu waa, maxay tahay qalabka loo isticmaalo inta lagu jiro geedi socodkan, waxa baahida loo xaliyey, faa'iidooyinka dhamaan iswaafajintaan.
INSPIRE Xakamaynta Tayada ee metadata, xogta iyo adeegyada: sida loo isticmaalo hababka baarista ee abstract iyo executableable
Waa mid ka mid ah arrimaha la xiriira mawduuca hore, qoraal by Alejandro Salas Guinea iyo Paula Rodrigo. Tani waxay ka bilaabataa adigoo adkaynaya sida tilmaamaha farsamo loo Waxyoodo ahayn, dhab ahaan ku jiri kara warbixin qiimo leh si loo hubiyo in interoperability xogta iyo sidoo kale habka loo baahan yahay waxaa lagu tilmaamay ee xogta, metadata iyo geedi socodka la xiriira in lagu dhiirrigeliyo waa wax ku ool ah oo hufan iyada oo loo marayo bixinta.
article waa mid aad u xiiso leh in akhristaha fikrad ka bixiyaan iftiin ah oo ku saabsan sida loo bilaabo la dhiiri shaqeeyo, laga bilaabo qaabeynta of ATS ah - dhigay imtixaanada aan la taaban karin, koodh iyo shuruudaha, sii ETS ah - nooc oo baaritaano eedeysanuhu, imtixaanka horumarka - Qalabka Tijaabinta, Cabbiridda Imtixaanka, iyo Baadhitaanka Cirbixinta, iyo sidoo kale natiijooyinka la helay.
Marka laga soo tago dib u eegista qodobbada kor ku xusan, shaqooyinka kale ee majalladani soo bandhigeen muggaan waxaa ka mid ah:
Valencian magac magaciisa ku qoran
Raadinta Geolake (mustaqbalka IDE waa hagaajinta liistada)
Xaaladda magacyada rasmiga ah ee magacyada Balearic Islands: Nomenclátor de Toponymy ee Menorca iyo mustaqbalka Geographic Nomenclature ee Balearic Islands.
Sida ugu horeysa, waxay ku dhawaaqeen Geobloggers ee daabacaddooda labaad, kaas oo ka dhici doona June ee 2019; dhacdo in Geofumadas taageeri doonto markale -waxaa-
Ku saabsan Khariidadda
Wargeyska Khariidadda, waa tixraaca Hispanic ee daabacaadda sayniska. Iyadoo sannado 28 ay faafinayaan shaqada iyo cilmi baarista arrimaha la xidhiidha aagga jimicsiga, kaabayaasha, maareynta xogta juqraafiyeed iyo horumarin muhiim ah oo ka dhacda xaaladan.
"Tan iyo 2013, kooxda tifaftirka hadda waxay qeexeen khad cusub oo istiraatiiji ah oo loogu talagalay MAPPING. Waxay dooratay excelencia iyo sharaf, Sheeganaya in magazine waa mid ka mid ah repositories ugu weyn ee macluumaadka iyo wararka warshadaha iyo xidhiidh ka dhexeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay, jaamacadaha iyo hay'adaha dawladda in la horumariyo mashaariic, baro oo ku faafiyaan geomatics iyo codsiyada ay qaybaha kala duwan ee samaynta ilaa Sciences Earth. "
Waxaan ku talineynaa socday internetka ee Macalester Khariidadda, waxaa laga yaabaa in ay jiraan ay helaan aad publications bi-billaha oo dhan.
Post Previous«Previous Warkii ugu fiicnaa ee wararka QGIS 3.X
Post Next Digital Twin - BIM + GIS - ereyo ka ciyaaray shirkii Esri - Barcelona 2019Next »